Kuburitswa uye kodzero dzemifananidzo - Law & More B.V.
Veruzhinji uye kodzero dzemifananidzo
Imwe yenyaya dzakakurukurwa zvakanyanya muWorld Cup ya2014. Robin van Persie anoverengera zvibodzwa zvinopesana neSpain mukutsvedza kusvetuka nemusoro wakanaka. Kuita kwake kwakanakisa kwakakonzeresa kushambadzira kwaCalvé muchimiro che poster uye yekutengesa. Wekutengesa anotaurira nyaya yemakore mashanu Robin van Persie uyo anowana kupinda kwake kuExcelsior nemhando imwecheteyo yekutsvedza kudhizaina. Robin angangodaro akabhadharwa chaizvo kushambadzira, asi iko kushandiswa kwekopiraiti kunogona kuchinjwazve nekugadziriswa pasina mvumo yaPersie?
Iyo kodzero yemifananidzo chikamu cheiyo copyright. Copyright iyi inopatsanura mamiriro maviri ekodzero yemufananidzo, iri mufananidzo wakaitwa panopihwa basa uye mufananidzo wausina kuitwa pachiro. Pakati pemamiriro ese aya pane musiyano mukuru mumhedzisiro yekushambadzira uye kodzero dzemapato akabatanidzwa.
Patinotaura nezve mufananidzo chaipo? Mubvunzo usati wapindurwa kuti chii chinonzi portrait uye kuti kodzero iyi inosvika kupi, mubvunzo wekuti chii chiri mufananidzo munzvimbo yekutanga, chinofanira kupindurwa pekutanga. Zvinotsanangurwa zvemutemo hazvipe chirevo chakakwana uye chakajeka. Setsananguro yemufananidzo inopihwa: 'mufananidzo wechiso chemunhu, uine kana pasina icho chemamwe mativi emuviri, munzira ipi neipi yaunogadzirwa'.
Kana isu tikangotarisa tsananguro iyi, tinogona kufunga kuti mufananidzo unongosanganisira chete chiso chemunhu. Zvisinei, izvi hazvisizvo. Sezvineiwo, kuwedzera: 'munzira ipi neipi yainogadzirwa' zvinoreva kuti hazvina basa nemufananidzo kana wakatorwa mifananidzo, wakapendwa kana kugadzirwa mune chero imwe nzira. Nhepfenyuro yeterevhizheni kana caricature inogona zvakare kuwira mukati mechikamu chemufananidzo. Izvi zvinojekesa, kuti chiyero cheizwi rekuti 'portrait' chakapamhama. Mufananidzo unosanganisirawo vhidhiyo, mufananidzo kana mufananidzo unomiririra. Maitiro akasiyana akaitwa zvine chekuita nenyaya iyi uye Dare Repamusorosoro rakazonyatsorondedzera izvi zvakadzama, zvinoti, izwi rekuti 'portrait' rinoshandiswa kana munhu achiratidzwa nenzira inozivikanwa. Kuzivikanwa uku kunogona kuwanikwa mune zvechiso uye kumeso, asi zvakare kunogona kuwanikwa mune chimwe chinhu. Funga, semuenzaniso, nezve chimiro chimiro kana bvudzi. Izvo zvakapoteredzwa zvinogona zvakare kutora chinzvimbo. Munhu ari kufamba pamberi pechivako panoshanda munhu iyeye anowanzozivikanwa kupfuura apo munhu iyeye paakaratidzwa panzvimbo yaaisazomboenda.
Panogona kunge paine kutyorwa kwekara pati kana munhu ari kuratidzwa anozivikanwa mufoto uye ikabudiswawo. Iyo inofanirwa kuve yakatarwa kana iyo mifananidzo yakatumirwa kana kwete uye kuti kuvanzika kunokurira rusununguko rwekutaura. Kana munhu akaraira mufananidzo, mufananidzo uyu unogona kungoitwa pachena kana munhu arikupa mvumo akatendera. Ipo copyright yemabasa iri ndeyemugadziri wemufananidzo, haakwanise kuita pachena pachena pasina mvumo. Rumwe rutivi rwemari iripo nderekuti munhu anoratidzwa haatenderwi zvakare kuita zvese nemufananidzo kana. Ehe, munhu anoratidzwa anogona kushandisa mufananidzo uyu pachivande. Kana munhu anoratidzwa achida kuita kuti dunhu rive pachena, anofanira kunge aine mvumo kubva kumugadziri wake. Mushure mezvose, iye musiki ane iyo copyright.
Zvichienderana neChipiri 21 cheMutemo weKopiraiti, musiki ari muruzivo ane kodzero yekuburitsa mufananidzo pachena. Nekudaro, iyi haisi mhedzisiro chaiyo. Munhu anozviisa pasi anogona kuita zvinopesana nezvakaburitswa, kana uye kusvika padanho rekuti anofarira kuita kudaro. Kodzero yekuvanzika inowanzo kutaurwa sekufarira zvine musoro. Vanhu vanozivikanwa senge vezvemitambo uye maartist vanogona, mukuwedzera kune zvine musoro kufarira, zvakare vane zvido zvekutengeserana kudzivirira kuburitswa. Pamusoro pekufarira zvekutengeserana, zvakadaro, mukurumbira anogona zvakare kuve nechimwe kufarira. Mushure mezvose, pane mukana wekuti iye / iye achatambura kukuvara kune rake / rake mukurumbira nekuda kwekuburitswa. Sezvo pfungwa ye "kufarira zvine musoro" iri yekuzviisa pasi uye mapato kazhinji asingadi kubvumirana pane kufarira, iwe unogona kuona kuti mafambiro mazhinji ari kuitiswa maererano nepfungwa iyi. Zviri padare redzimhosva kuona kana kufarira kwemunhu akaratidzirwa kunokunda kufarira kwemugadziri uye kuburitswa.
Izvi zvinotevera zvikonzero zvakakosha kune iri mufananidzo kurudyi:
zvine musoro kufarira
Kana tikatarisa muenzaniso waRobin van Persie, zviri pachena kuti ane zviri zviviri zvine musoro uye zvekutengesa kufarira zvakapihwa mukurumbira wake mukuru. Dare rakatonga kuti kufarira kwemari uye yemabhizimusi kufarira mutambi wepamusoro kunogona kutaridzwa sekufarira kwechikamu mukati mechinorehwa neChikamu 21 cheMutemo Wemutemo. Tichitarisisa kuchinyorwa chino, kuburitswa uye kubereka patsva kwemifananidzo hazvibvumirwe pasina mvumo yemunhu ari kuratidzwa pamufananidzo, kana kufarira munhu iyeye kuchiramba kuburitswa. Mutambi wepamusoro anogona kubhadharisa mubhadharo kuti apiwe mvumo yekushandisa mufananidzo wake nekuda kwezvekutengesa. Nenzira iyi anokwanisawo kushambadzira mukurumbira wake, izvi zvinogona kutora fomu yechibvumirano chekutsigira, semuenzaniso. Asi zvakadiniko nezve Amateur nhabvu kana iwe usinganyatso kuzivikanwa? Mune mamwe mamiriro ezvinhu, iko kuratidziro kurudyi kunoshandawo kune vatambi vemitambo yepamusoro. Mukambani yeVanderlyde / yekushambadzira Spaarnestad mutongi mupi amateur anopikisa kuburitswa kwemifananidzo yake mumagazini yevhiki. Mufananidzo uyu wakaitwa pasina komisheni yake uye anga asina kupa mvumo kana kugamuchira mari yekubhadhara. Dare rakatarisa kuti mumhanyi weanoshami anokodzera kupihwa mari pamukurumbira wake kana mukurumbira wacho ukazova nemutengo wemusika.
Kana zvaunofarira zvichiita kunge zvichityorwa, unogona kuda kurambidzwa kushambadzira, asi zvakare zvinoita kuti mufananidzo wako watove watove wakashandiswa. Panguva iyoyo unogona kukumbira muripo. Mari iyi yekubhadhara kazhinji haisi yakanyanya asi inoenderana nezvinhu zvakati. Pane zvisarudzo zvina zvekutora matanho ekutyora kodzero dzechifananidzo:
Tsamba yemasamanisi nekuzivisa kwekurega
Masamanisi ezviitiko zvehurumende
Iyo nguva pazvinova pachena kuti kodzero yemumwe munhu iri kutyorwa, zvinowanzo kukosha kuwana kurambidzwa kwemamwe mabhuku mudare nekukurumidza. Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, zvinoitawo kuti zvinyorwa zvibviswe mumusika wekutengesa. Izvi zvinonzi chiyeuchidzo. Maitiro aya anowanzo kuperekedzwa nechikumbiro chekukuvara. Mushure mezvose, nekuita zvinopesana nekodzero yemufananidzo, munhu anoratidzwa anogona kukuvara. Iyo muripo wakakura sei zvinoenderana nekukuvara kwaitwa, asi zvakare pamufananidzo uye nzira iyo munhu wacho anoratidzwa Iko kune zvakare faindi pasi peChitsauko 35 cheCopyright Act. Kana iyo portrait kodzero ikatyorwa, iye anotadzira iyo portrait kodzero ane mhosva yekutyora uye iye / iye acharipiswa faindi.
Kana iko kurudyi kukanganiswa, iwe unogomawo kukumbira zvakakanganisika. Iwe unogona kuita izvi kana mufananidzo wako watobudiswa uye unotenda kuti zvaunofarira zvakatyorwa.
Huwandu hwemuripo hunowanzo sarudzwa nedare. Mienzaniso miviri inozivikanwa ndeye "Schiphol gandanga pikicha" umo mapurisa emauto akasarudza murume aive nechitarisiko cheMuslim kutarisa chechengetedzo nerunyorwa pasi pemufananidzo "Is Schiphol is safe?" uye mamiriro emurume aive achienda kuchitima akatorwa mifananidzo achifamba achipfuura neRed Light District achipedzisira abuda mupepanhau pasi pemusoro unoti "Kutarisa pahure"
Muzviitiko zvese izvi kwakatongwa kuti kuvanzika kwakapfuura rusununguko rwekutaura. Izvi zvinoreva kuti haugone kungoburitsa pikicha yega yega yaunotora mumugwagwa. Kazhinji aya ndiwo marudzi ebhadharo pakati pe1500 kusvika 2500 euros.
Kana, pamusoro pekufarira kunonzwisisika, kune zvakare kufarira kwekutengesa, muripo unogona kuve wakanyanya kukwirira. Iko kuripirwa kunobva kwazvakazove kwakakodzera mumigove yakafanana uye saka kunogona kuve makumi ezviuru euros.
Kufunga nezve zvingangodaro kurangwa, kuchenjera kuita nokungwarira kana uchishambadzira mifananidzo uye kuyedza nepamunogona napo kuwana mvumo yevanonetseka pachine nguva. Mushure mezvose, izvi zvinodzivirira kukurukurirana kwakawanda mumashure.
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvenyaya yekodzero dzenhare kana kana uchikwanisa kushandisa dzimwe mifananidzo pasina mvumo, kana kana uchitenda kuti mumwe munhu ari kutyora kodzero yako yemifananidzo, unogona kubata magweta Law & More.
Next Kudzingwa kwekambani director »
pashure «Kurambana nevana